Excel Ucocekileyo Umsebenzi ukususa iziganeko ezingabonakaliyo
Sebenzisa umsebenzi ococekileyo ukususa inani labalinganiswa bekhompyutheni abangaphendulwanga abakopishwe okanye bangeniswe kwiphepha lokusebenzela kunye nedatha efanelekileyo.
Le khowudi yezinga eliphantsi ifunyanwa rhoqo ekuqaleni kunye / okanye ekupheleni kweefayile zeedatha.
Eminye imizekelo eqhelekileyo yabalinganiswa abangabonakaliyo kubalwe kubalinganiswa abaxutywe kunye neetekisi kwimimandla kwiiseli A2 kunye ne-A6 kumfanekiso ongentla.
Ezi zibalo zingaphazamisa ukusebenzisa idatha kwimisebenzi yokushicilela njengokushicilela, ukuhlunga kunye nokucoca idatha.
Susa i-ASCII engekho-Printable kunye ne-Unicode Characters nge-Function CLEAN
Umlingisi ngamnye kwi-khompyutheni ephrintiweyo kwaye engaprintwa - inombhalo eyaziwa njengekhowudi yayo ye-Unicode okanye ixabiso.
Omnye, omdala, kunye nolwazi olubhekiselele kumgca we-ASCII, omelela i-American Standard Code ye-Interchange Information, ifakwe kwisinqununu se-Unicode.
Ngenxa yoko, iinhlamvu zokuqala ezingama-32 (0 ukuya ku-31) zee-Unicode kunye ne-ASCII iiseti zifana kwaye zibhekiswa njengezobaluleka zokulawula ezisetyenziswe iinkqubo zokulawula izixhobo zepheritha ezifana nabaphrinta.
Ngaloo ndlela, azenzelwe ukusetyenziswa kwiphepha lokusebenzela kwaye kunokubangela iintlobo zeziphoso ezikhankanywe ngasentla xa zikhoyo.
Umsebenzi ococekileyo, owawusungula i-Unicode isethi yomdlalo, wenzelwe ukususa iimpawu ze-ASCII zokuqala ezingezi-32 ezingabonakali kwaye ususe abalinganiswa abafanayo ukusuka kwi-Unicode.
I-Syntax yeCandelo leMisebenzi kunye neeArguments
I-syntax yomsebenzi ococekileyo ngu:
= EZIQHELEKILEYO (Umbhalo)
Umbhalo - (ofunekayo) idatha yokucocwa kweenhlamvu ezingabhaliweyo. Isalathiso seeseli kwindawo yolu datha kwiphepha lokusebenzela.
Umzekelo, ukucoca idatha kwiseli A2 kumfanekiso ongentla, faka ifom:
= ESEKILEYO (A2)
kwelinye iselfowuni lomsebenzi.
U kucoca a manani
Ukuba isetyenzisiweyo ukucoca idatha yedatha, umsebenzi ococekileyo, ukongeza kokususa nawuphi na unobumba obungabonakali, uya kuguqula onke amanani ukuya kubhaliweyo-oko kunokubangela iimpazamo ukuba loo datha isetyenziswe kwizibalo.
Imizekelo: Ukususa Abalingani abangabonakaliyo
Kukholomu A emfanekisweni, umsebenzi we- CHAR usetyenziswe ukwengeza unobumba obungabonakali kwisicatshulwa sombhalo njengoko kuboniswe kwibhar yomfom ngasentla kwiphepha lokusebenzela le-A3 yeseli elususwe ngolu hlobo olusebenzayo.
Kwiikholomu B no-C womfanekiso ongentla, umsebenzi we-LEN, obala inani labalinganiswa kwiselfowuni, usetyenziselwa ukubonisa umphumo wokusebenzisa umsebenzi ocolileyo kwi-data kwikholam A.
Isilinganisi sokubala kwiselfayile B2 si-7 - abalinganiswa abane kwi- text text and three for the non-printers characters around it.
Ubuninzi bomlingiso kwisitokisi C2 ngu-4 kuba umsebenzi ococekileyo udibaniswe kwifomula kwaye uyabamba amanqaku amathathu angabonakali ngaphambi kokuba umsebenzi we-LEN ubale abalinganiswa.
Ukususa iziganeko # 129, # 141, # 143, # 144, kunye no-# 157
Isilathisi sesimboli se-Unicode sineenkcukacha ezingezizo zokushicilela ezingabonakali kwi-ASCII yamanani - iinombolo 129, 141, 143, 144, ne-157.
Nangona i-website ye-support ye-Excel ithi ayikwazi, umsebenzi ococekileyo unokususa ezi zinhlamvu ze-Unicode ukusuka kwidatha njengoko kuboniswe kumqolo wesithathu ngentla.
Kulo mzekelo, umsebenzi ococekileyo kwikholam C isetyenziselwa ukuhlutha ezi zihlanu ezingabonakali zokulawula abalingani baphinde baphinde babone inani lomlingiso ezine kuphela kwi- text text in C3.
Ukususa Uphawu # 127
Kukho uphawu olungagcini ukushicilela kwisethi ye-Unicode ukuba umsebenzi ongeke ukwazi ukususa - umbala obhalwe ngebhokisi # 127 oboniswe kwiseli ye-A4, apho ezine zababalandeli zizungezile umbhalo wegama.
Isibalo sesibalo sesibhozo kwi-C4 yeselanayo sifana nelokweseli B4 kwaye ngenxa yokuba umsebenzi ococekileyo kwi C4 uzama ukuphumelela ukususa # 127.
Nangona kunjalo, njengoko kuboniswe kwimigangatho emihlanu neyesithandathu ngentla, kukho iifomula ezizezinye usebenzisa imisebenzi ye-CHAR ne- SUBSTITUTE engasetyenziselwa ukususa lo mlingiswa:
I-formula kumqolo wesihlanu isebenzisa i-SUBSTITUTE kunye ne-CHAR ukuze ithathe indawo yomntu ongu-# 127 ngomlinge onokuthi umsebenzi ococekileyo ungasusa-kulo mzekelo, umlingisi # 7 (icandelo elimnyama elibonwe kwiseli A2);
I-formula kumqolo wesithandathu isebenzisa imisebenzi ye-SUBSTITUTE kunye ne-CHAR ukuze ithathe indawo yomntu ongu-# 127 ngokungenanto njengoko kuboniswe ngamanqaku okucaphuna angenanto ( "" ) ekupheleni kwendlela kwifom D6. Ngenxa yoko, umsebenzi ococekileyo awudingekanga kwifomula, kuba akukho mnye uhlamvu olusususayo.
Ukususwa kweZithuba ezingenzi ukuPhula kwiShishini lokuSebenza
Iifana neenkcukacha ezingabonakaliyo yindawo engenziwanga kunye nayo ingabangela iingxaki ngokubala nokufometha kwiphepha lokusebenzela. Ixabiso le-Unicode yesithuba esingenanto sokuphulwa yi-# 160.
Izikhala ezingabikhoyo zisetyenziselwa kakhulu kumaphepha ewebhu - ikhowudi ye-ht for it & nbsp; - ngoko ke ukuba idatha ikopishwa kwi-Excel ukusuka kwiphepha lewebhu, izikhala ezingabikho zingabandakanywa.
Enye indlela yokususa izikhala ezingabikho kwi-worksheet yile fom edibanisa i-SUBSTITUTE, CHAR, kunye ne-TRIM.
Indlela yokudala Ishadi lekholamu kwi-Excel
Injongo Yobungakanani kwi-Excel kunye ne-Google AmaSpredishithi
Funda indlela yokusebenzisa i-Excel's TRANSPOSE Function: Flip Rows okanye iikholam
Ukuguqula umbhalo kwiNombolo kunye ne-Excel I-Special Special
Indlela 'Impikiswano' isetyenziswe kwiMisebenzi okanye iFomula
Igama lebhokisi kunye neendlela ezininzi zokusetyenziswa kwi-Excel
Inkcazelo, Ukusetyenziswa kunye neMimiselo yeMisebenzi kwi-Excel
Ukongeza ii-Excel Hyperlinks, Bookmarks, kunye ne-Mailto Links
Indlela yokongeza iikholam okanye iiNombolo zeNombolo kwi-Open Office Calc
Iimpawu zokuGcina iiVideos zokuPhatha kweMidlalo
Indlela yokufaka i-Skype kunye nobuntu
Indlela yokufaka i-HTML kumaxwebhu amaninzi usebenzisa i-PHP
Indlela Yokuhlela Iifayile Zombhalo usebenzisa iGEdit
Iindidi ze-RAM eziqhuba iiikhomputha zeNamhlanje
Izikhokelo ze-imeyili kunye neCow Chofoza kwi-Yandex.Mail
Ngaba i-Minecraft ingaba "Yitshintshe"?
I-Guitar Hero: Ii-Warriors ze-Rock Cheats
Iimpawu ezi-7 ezigqwesileyo zoMqulu kunye ne-Photo of 2018
Indlela yokuhlela ama-imeyili ngomhla ofunyenwe kwi-Thunderbird
Iindlela ezingenakunciphisa kwiPilisi ye-Beats + I-Bluetooth Somlomo
Ngaba kufuneka uthenge i-iPhone App yeDivaysi nganye ehambelanayo?
Umgaqo-nkqubo we-Wireless Wireless Verizon
Indlela yokongeza iiMbonakalo kwi-iPhone okanye iPod Touch
I-Numeri ejikelezayo eya kwi-Excel eFondayo ngakumbi
Akukho-Ikhontrakthi yeCricket ehlawulwa ngokungekho ngeNkqubo
Nantsi iMac's 21.5-intshi Lineup
I-SOHO Routers kunye neeNethiwekhi ezichazwe
Abasemgcini baselula be-Android kunye ne-iOS
Ndiyakwazi Ukufumana I-Windows Live Mail Download Simahla?
I-Minecraft yeGamemode: Ubumba
Iifomphi zekhompyutheni zifumana njani i-Best of You